घुम्न जाने होइन त रूरू क्षेत्र?. Break n Links: Media for all - Across the globe
घुम्न जाने होइन त रूरू क्षेत्र?
हिन्दू माझ नेपालको चार धामका रुपमा पशुपति, बराहक्षेत्र, रुरुक्षेत्र र मुक्तिनाथ प्रख्यात तीर्थस्थल हुन्। जीवनमा चारै धामको दर्शन गर्दा पुण्य मिल्छ। यहाँ रूरू क्षेत्रको चर्चा गरिएको छ।
चार धाम मध्ये एक हो रूरू क्षेत्र। रूरू क्षेत्र गुल्मी, पाल्पा र स्याङजाको संगममा पर्छ। कालीगण्डकी र रिडी नदी किनारमा बजार (४६५ मिटर) छ। रिडी बजार पारिपट्टि पाल्पामा ऋषिकेश मन्दिर, स्याङजामा भृगुतुंगेश्वर गुफा र गुल्मीमा गलफुले ओडार र देवदत्त पार्क छन्।
दुई नदीको संगममा स्नान गरे पाप पखालिने जनविश्वास छ। तिर्थालु त्यहाँ नुहाएर भगवान ऋषिकेशको दर्शन गर्छन। वर्षैभरि पूजा–पाठ गर्न सकिन्छ। बिशेषतः कात्तिके एकादशी, द्वादशी र माघे संक्रान्तिमा ठूलो मेला लाग्छ।
कात्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन भगवान प्रकट भएको मानिन्छ। त्यहि तिथिमा पाल्पाली राजा मणि मुकुन्द सेनले मन्दिर बनाई गण्डकीमा भेटिएका ऋषिकेशको शिलालाई मन्दिरमा स्थापना गरेका थिए। त्यसकै सम्झनामा ऋषिकेशको रथ यात्रा निकालिन्छ।
कालीगण्डकी आफैंमा पवित्र नदी मानिन्छ। रिडी र गण्डकी संगममा स्नान गर्नेहरुको पाप पखालिन्छ। मानिस जन्मँदा लिएर आउने तीन ऋण (देव ऋण, पितृ ऋण र ऋषि ऋण)बाट समेत मुक्ति मिल्छ।
रिडी बजार अर्घाखाँची, तम्घास (गुल्मी सदरमुकाम), बुर्तिबाङ (बाग्लुङ) र पाल्पा जाने चौराहा हो। जहाँ साना–ठूला होटल छन्। खानामा बोकाको मासु, लोकल माछा र चुकाउनी यहाँका बिशेषता। गण्डकीका शालीग्राम शीला र गुँड (सख्खर) कोसेली ल्याउन सकिन्छ।
बजार माथि गलफुले ओडार भएको ठाउँमा देवदत्त पार्क छ। त्यहाँ ऋषि देवदत्त, रुरु कन्या र मृगहरुको प्रतिमा बनाइएको छ। ओडार पनि आकर्षक छ। दुई रात रिडीमा बिताउने गरी यात्रा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तानसेनबाट रानीमहल, छेर्लुङ हुँदै अर्गलीबाट हिँडेर समेत रिडी पुग्न सकिन्छ। यसरी पदयात्रा गर्न एक दिन लाग्छ। तानसेनबाट बसमा जाँदा भने डेढ घन्टा लाग्छ।
‍काठमाडौंबाट रिडी ३४० किलोमिटर। काठमाडौंको नयाँ बसपार्क र रिडीबाट बिहान बस छुट्छन्। तीनले १० घन्टामा गन्तव्य पुर्‍याउँछन्। तम्घास जाने बसमा गएर पनि रिडी ओर्लन सकिन्छ। तानसेनको बसमा पनि जान सकिन्छ। तानसेन–रिडी ३१ किमिमा जिप र बस चल्छन्।
तिर्थमा निस्किँदा मनमा रिस, द्वेश, इश्र्या जस्ता भावना बोक्नु हुँदैन। शुद्ध अनि पवित्र मनले मन्दिर प्रबेश गर्नु पर्छ। ख्याल गरौं यात्रा योजना बनाउँदा तिर्थस्थलबारे जानकारी लिनु पर्छ। हावापानी, खाना, बास र घुम्ने ठाउँको जानकारी लिएर पहिल्यै होटल तथा लज बुकिङ गरेमा समस्या झेल्नु पर्दैन।
यात्रामा शाकाहारी खाना र फलफूल खानु बेस हुन्छ। मन्दिर क्षेत्रमा मदिरा, धुमपान र माछामासु सेवन गर्नु हुँदैन। साथै हो–हल्ला गर्नै हुँदैन। साथै पूजा गर्दा र धुपबत्ति बाल्दा मन्दिरका मूर्ति वा काष्ठकलालाई असर पु¥याउनु हुँदैन। ख्याल गरौं है, अबिर लगायत रसायनले रंगाउँदा मूर्तिको आयु छोट्टिन्छ।
मन्दिरभित्र नगद नचढाऔं, बरु त्यहाँ राखिएका बाकसमा रकम खसालौं। त्यसो गर्दा त्यो रकम मन्दिर विकासमा खर्च हुन्छ, व्यक्तिले लिन पाउँदैन।
मन्दिर क्षेत्रका नदी, धारा र कुण्डमा नुहाउँदा छोटा र पारदर्शी कपडा प्रयोग नगरौं, घुँडासम्म छोप्ने जाँघे लगाएर नुहाऔं।
मन्दिर क्षेत्रका पसलबाट धागो, भाँडावर्तन, पुस्तक, तस्बिर आदि कोसेली किनौं। कोसेली पाउँदा परिवार र इष्टमित्र खुशी हुन्छन् भने उद्यमशिलता विकासमा पनि टेवा पुग्छ।
बिशेषतः परिवारै यात्रामा निस्किँदा मनमा प्रशन्नता र आनन्द छाउँछ।